देउवा र पौडेललाई प्रकाशमान सिंहको प्रश्न : गणेशमानको परिवारले सधैँ त्याग मात्र गर्नुपर्ने ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेस नेतृत्व कमजोर भएकै कारण कम्युनिस्टहरुको मनोबल बढेको बताएका छन् । काठमाडौँ महानगरमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुको शुभकामना आदान प्रदान तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै नेता
बाजुरामा प्रहरी र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप : एक प्रहरी घाइते
बाजुरा । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाअधिवेशनअन्तर्गत बाजुरा जिल्लामा आज भएको जिल्ला अधिवेशनका क्रममा झडप भएको छ । जिल्ला निर्वाचन समितिका प्रवक्ता प्रेम रौलेले मतदान सकिएर मत पेटिका व्यवस्थापन गर्ने क्रममा
प्रतिपक्षीले एकोहोरो नाराबाजी मात्र गरे, जबाफ सुन्न चाहेनन् : दिलेन्द्र बडु
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरुले संसद्‌मा विभिन्न विषय उठाएर नाराबाजी गरे पनि त्यसको जबाफ सुन्न नचाहेको बताएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा
विमलेन्द्र, प्रकाशमान र शशांकबीच बानेश्वरमा छलफल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको सभापतिका दाबेदार तीन नेताबीच भेटवार्ता भएको छ । महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेताहरु विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइरालाबीच सोमबार भेट भएको हो । निधि
कांग्रेस अधिवेशन : देउवा र पौडेलका ४–४ जिल्ला सभापति विजयी (सूचीसहित)
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अन्तर्गत सात जिल्लाको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । सोमबार बिहानसम्मको जिल्ला अधिवेशनको नतिजा अनुसार सस्थापन अर्थात सभापति शेरबहादुर देउवानिकट तीनजना सभापति विजयी भएका छन्
संस्थापन पक्षप्रति प्रकाशमान सिंहको आक्रोश : पार्टीमा बोल्न पाइँदैन भन्ने को हो ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पार्टीको संस्थापन पक्षले दम्भ देखाएको आरोप लगाएका छन् । पार्टी विवाद समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोल्दा पदाधिकारीहरुले नै पार्टीका कुरा बाहिर नलैजान भन्ने गरेको
कांग्रेसकाे सङ्खुवासभा जिल्ला सभापतिमा दीपक खड्का विजयी
खाँदबारी । नेपाली कांग्रेस सङ्खुवासभा सभापतिमा दीपक खड्का निर्वाचित भएका छन् । प्रतिस्पर्धी रामबहादुर राईलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै खड्का सभापति पदमा निर्वािचत भएका हुन् । कुल खसेको एक हजार
धनकुटा । नेपाली कांग्रेस धनकुटा नगर सभापतिमा नरेश श्रेष्ठ चयन भएका छन् । एक साताको रस्साकस्सीपछि शनिबार बिहान श्रेष्ठको सभापतित्वमा ५७ सदस्यीय नगर समिति सर्वसम्मत चयन भएको हो । समितिको
प्रकाशमानको प्रश्न : म गणेशमानको छोरा भन्दैमा सभापति बन्न नपाउने ? (भिडियाे)
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले १४औँ महाधिवेशनबाट आफूलाई सभपाति जिताउन आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले उपत्यकाबासीले बाहिरबाट आएका नेताहरुलाई
कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन गर्दैन, सबै दल मिलेर आए पनि बहुमत ल्याउँछौँ : गगन थापा (भिडियाे)
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले आगामी चुनावमा कम्युनिस्ट, मधेसवादी र राप्रपा मिले पनि कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको कांग्रेस अधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै